China ehlombe ukugoqa ice pack ifektri abakhiqizi | UHuanyi
Igama lomkhiqizo: I-Gel Pad Ice Pack yeNeck
Usayizi: Amasentimitha angama-22 * 7.5
I-logo eyenziwe ngokwezifiso nephakheji
Isitifiketi: I-SGS, i-FDA, i-CE, i-REACH, i-PROP65, i-BSCI
Lawa mapakethe wejel agcina eguquguqukayo ngemuva kweqhwa, ngakho-ke ungawabeka ezungeze idolo lakho, ihlombe nentamo.
Kungani sikhetha i-gel ice pack ukuqeda izinhlungu?
Noma ngabe unezinhlungu emuva ngenxa yokuhamba ngebhayisikili, noma ukuvuvukala okunamandla okuhlinzwa, vele usebenzise leli phakethe leqhwa ukukhululeka kobuhlungu bentamo nehlombe.
Ngemuva kwamahora ambalwa efrijini, iphakethe leqhwa lokulimala libanda kakhulu! Eqinisweni, kuba nesithwathwa kakhulu, sesivele sibuyisela emuva eqhweni elinethezekile ukuthola ukukhululeka okukhulu.
1.Ukuhlangenwe nakho Kweminyaka eyi-10 kwe-OEM, i-ODM, umbala owenziwe ngokwezifiso, ilogo, amaphakheji. Ingakunika iziphakamiso zochwepheshe ekusetshenzisweni nasekugcinweni, ukukhetha ikhambi elingcono lomkhiqizo wakho.
2.Ifektri inemigqa Engaphezulu Kwama-20 Yokukhiqiza, inqwaba yezimpahla ezingavuthiwe nezindwangu zombala, indawo yokusebenzela yeSilkscreen ingahlangabezana nezidingo zakho kulogo, siphinde senze inkambiso yesikhwama ngokwethu singapakisha umkhiqizo wakho uhlanzekile.
4.Ngalelo phakethe leqhwa lehlombe, ifektri yethu inamasayizi ahlukile nokuma kokukhetha kwakho, kunganela abantu abaningi.
Langaphambilini I-Thermal gel yokushisa ikepisi
Olandelayo: hot and abandayo gel pack
Iphakethe Leqhwa Elikhulu Namahlombe
iphakethe elibandayo lentamo
I-Ice Pack Yentamo Nobuhlungu Bamahlombe
I-Ice Pack Yezinhlungu Zentamo
Ukugoqwa Kweqhwa Lentamo
Amaphakethe weColder ehlombe
Iphakethe Lehlombe Ehlombe
Ukugoqwa Kweqhwa Ehlombe